The Best Fashion Instagram – FemaleWear.net
Tag: The Best Fashion Instagram
Billboard Music Awards ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Billboard Music Awards ကို Las Vegas မှာခမ်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကိုတော့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာက တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ လှပနေကြပြီး အားလုံးထဲကနေ အလှဆုံး ဖက်ရှင်နဲ့အနုပညာရှင်တချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ My…
Fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် Follow လုပ်ထားသင့်သော ကိုရီးယား influencer (၅) ယောက်
Korea style ချစ်သူတွေအတွက် ကိုရီးယားမလေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ instagram influencer တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့ကို follow လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားမလေးတွေရဲ့ အလှအပနဲ့ စတိုင်လေးတွေကို inspired ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ 1. BYUN…
တပတ်တခါ တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ The Best Fashion Instagram ကရော ဒီတပတ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို fashion ချစ်သူတွေအတွက် ရင်ခုန်စွာနဲ့ အမြဲစောင့်ဆိုင်းနေကြရတာပါ။ ဒီတပတ်မှာတော့ Celebrity များစွာရဲ့ fashion တွေလည်း ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုဘယ်သူတွေက ဘယ်လို fashion အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပါဝင်နေမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ …
ဒီအပတ်အတွက် Instagram ရဲ့ Popular Fashion Post များ
တပတ်တခါ တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Instagram မှာခေတ်စားသော Popular Fashion ပို့စ်များကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအပတ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်လောကမှာ ဘယ်လိုမျိုး fashion တွေနဲ့ brand တွေကို ဖန်တီးပြီး ဝတ်ဆင်ကြသလဲ? popular ဖြစ်သလဲ? ဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျမိတဲ့ သူရှိရင်လည်း Follow လုပ်ပြီး noti…